Markay Ogaato Kadib Waxay Waxay Taqaanay Hada, #Qayabtayda_Qalsoon »Hodges U
Ogaanshaha Kadibna Waxay Taqaanay Hada - #Hooydayda Sheekada Marta "Dotty" Faul
Muddo dheer kahor Martha “Dotty” Faul waxay iska qortay Jaamacada Hodges, waxay kudhowaad 20 sano ku qaadatay dhisida xirfad ku saabsan sharci fulinta labada xafiis ee DeSoto County iyo Charlotte County Sheriff's Office.
Laga soo bilaabo kormeerka wadada shaqada ee ku-xigeenka shariifka illaa iyo la tacaalidda baaritaanka dambiyada sidii dambi baare, Faul wuxuu arkay oo goobjoog u ahaa waxa dad badani qiyaasi karaan. Iyadoo fadhiday dhinaca sharciga ee u nugul xaqiiqooyinka xun iyo xaqiiqda adag ee aadanaha, Faul waxay fariisatay bishii Ogosto 2009 waxayna furatay meherad u gaar ah, Adeegyada Baarista Cadaaladda, Inc.., Sanadkii 2010 si ay ugu fidiso kaalmadeeda dadka dhibaateysan.
Intii ay ku jirtay marxaladaha hore ee furitaanka ganacsigeeda, waxay ogaatay muhiimada ay shahaado siin karto dhismaha shirkadeeda. Intii ay ka shaqeynayeen Xafiiska Sheriff County Charlotte, wakiillo ka socda Jaamacadda Hodges (oo markaa loo yaqaan International College) ayaa booqday si ay ugala hadlaan bixinta koorsooyinka.
“Waan ka xumahay inaanan ku qaadan dalabkoodii markaas,” ayay ku qososhay. "Laakiin markii la gaadhay waqtigii aan ku noqon lahaa dugsiga, waxaan xusuustay Hodges, sidaa darteed waxaan iska qoray dugsiga ganacsiga 2009."
Kadib markay lix bilood ku jirtay barnaamijka ganacsiga kana shaqeysay iibka xeebta bari ee Florida, Faul waxay xaqiiqsatay in hibadeeda ay sifiican ugu haboontahay cadaalada danbiyada, ee aysan aheyn ganacsi, sidaa darteed waxay u wareegtay barnaamijyada shahaadada, iyadoo dhamaan fasaladeeda ku qaadanaysa qadka.
Arday ahaan khadka tooska ah, waxay qiraysaa, “Runtii waxaan dareemayaa inaan helay fiiro gaar ah maxaa yeelay guddiyada wadahadalka ayaa ii oggolaaday fursad aan ku hadlo, macallimiintana si fudud ayaa loo heli karaa. Uma baahnin inaan ka walwalo waqtiga oo iga dhammaanaaya fasalka oo aan ku degdegayo xagga hore si aan su’aal u weydiiyo barafasoorka. ”
Keenida khibradeeda sanadeed ee ku saabsan sharci fulinta barnaamijkeeda shahaadada, Faul waxay ogaatay inta ay le'egtahay shaqadeeda xirfadeed inay diirada saareyso kaliya hal aag, iyo sida koorsooyinka ay uheliyeen aragti qiimo leh saaxada balaaran ee ah cadaalada dambiyada.
Koorsooyinka ayaa i baray oo ku saabsan maaraynta, toosinta iyo caddaaladda carruurta. Wax badan ayaan ka bartay taariikhda cadaaladda dambiyada iyo sida dhaqamada kala duwan ay u wajahaan cadaaladda dambiyada, ”ayay tiri.
Iyada kasbatay Shahaadada Bachelor-ka ee Caddaaladda Dambiyada sanadkii 2012, waxay xooga saartay dadaalkeeda ku aadan dhisida ganacsigeeda. Iyada iyo kooxdeeda ka kooban 20 xirfadlayaal baarista waxay la shaqeeyaan gobolka Florida si ay u caawiyaan dadka saboolka ah ee nidaamka cadaaladda dembiyada ee aan awoodin difaac sharci ah. Iyadoo si dhow ulashaqeysa qareenada, Faul iyo kooxdeeda waxay adeegsadaan qibradooda si ay uga caawiyaan uruurinta xaqiiqooyinka, cadeynta iyo macluumaadka si loo dhiso kiis wax ku ool ah.
In kasta oo kiisasku u dhexeeyaan khiyaano illaa dil loo geysto dadka maqan, Faul waxay adeegsataa qibradeeda ku saabsan ogaanshaha beenta iyo khiyaanada si ay uga caawiso baaritaannada; si kastaba ha noqotee, dabeecadda ganacsigeeda iyo xiriirka ay la leedahay nidaamka sharciga, waxay mar kale u jeesatay Hodges si ay u sii wadato waxbarashadeeda, markan kaliya waxay ku qaadatay barashada sharciga.
"Waxaan la hadlay Dr. [Char] Wendel, waxayna ii sheegtay in barashada sharciga ay aad uga duwan tahay tan dambiyada, laakiin waxaan ogaaday inaan jeclahay, labadooduna runti way is barbar socdaan," ayay tidhi. .
Isqorista Master of Science ee Daraasaadka Sharciga barnaamijka shahaadada ee sanadka 2016, Faul waxay qireysaa manhajka iyo shaqooyinka loo igmaday inay awood u siisay inay wax ku biiriso ganacsigeeda qaab cusub oo cusub. Faul oo ka baraneysa waxyaabaha ku saabsan mowduucyada, u hoggaansamida iyo kiisaska kooban, Faul waxay adeegsaneysaa aqoonta si ay uga caawiso beddelka habka iyada iyo kooxdeeda ay sifiican ugu caawin karaan qareennadooda.
Inaad ogaato sida sharcigu u shaqeeyo wax badan ayey kaa caawinaysaa markaad bannaanka joogto. Haddii aan ogaado waxa ka dhici doona qolka maxkamadda iyo sababta ay ugu baahan yihiin waxyaabaha qaarkood, waxay ka dhigeysaa kiiskeyga mid aad u wanaagsan, ayay tidhi. Hadda, dhinaca kale, waan ogahay waxa ay ahayd inay sameeyaan, marka waxaan u gudbin karaa qareenadeyda si ay u caawiyaan. ”
Iyadoo ay u harsan tahay toddobaadyo ka hor inta aysan qalin jabin bishii Diseembar 2017 iyada oo qaadatay shahaadada mastarka, Faul waxay rajeyneysaa inay qaadato aqoonteeda iyo khibradeeda xirfadeed isla markaana ay ku ballaariso hibada ay u leedahay dhanka barista.
Waxaan soo maray waxyaabo badan oo kala duwan, waxaanan rabaa inaan dib u soo celiyo qaar ka mid ah, waxbarashaduna waa hab fiican oo lagu sameeyo. Inaan awoodo inaan la wadaago qaar ka mid ah waaya-aragnimadayda oo aan la wadaago qaar ka mid ah aqoontii aan soo bartay iyo sida loo dabakho - aad ayey iigu qancaysaa aniga. ”
Tags: Justice Dambiyada, Jaamacadda Hodges, HodgesU, Daraasaadka Sharciga, Martha Faul, Master of Daraasaadka Sharciga, Ku Dhawaw Go Far